Kubafundi nabazali UkuSindisa iSikolo soMthetho
Ingaba ungumfundi obonakalayo, ophicothiweyo okanye onomzimba?
Njengoko uhlakulela umkhuba wakho wokufunda esikolweni somthetho, kubalulekile ukuqonda ukuba uluphi uhlobo lomfundi onjalo ukuze ukwazi ukucwangcisa ubuchule bakho bokufunda malunga naloo nto. Emva koko, ukuba unako ukufumanisa iindlela ezidlala kumandla akho, amathuba akho okukhumbula ulwazi kunye nokwenza kakuhle esikolweni ukwandisa kakhulu.
Kukho iintlobo ezintathu zeendlela zokufunda: ezibonakalayo, eziphicothiweyo kunye nezicwangco. Ukuba awuqinisekanga ukuba uluhlobo luni lomfundi, thatha le mibuzo ukuze ufumane.
Kulo thumela, siza kujonga ezinye iingcebiso zokukunceda ngokuxhomekeke kwisiphi isitayela sokufunda esifanelekileyo.
Thatha amaNqaku kwiiLwimi - Abafundi ababonayo banokuxinwa kwexesha elikhunjulwayo yonke into oyithethayo uprofesa evela kwipolomu. Yingakho kubalulekile ukuthatha amanqaku ngexesha leentetho. Qinisekisa ukuba ubhala phantsi oko kubhalwe ebhodini. Emva kokuba iklasi iphelile, funda kwakhona kwaye ubhale kwakhona amanqaku akho ukusuka kule nkqubo yokufunda nokubona amagama aya kunceda ukufaka ulwazi kwimemori.
Bhala iNgxelo - Enye yezindlela ezifanelekileyo zokulungiselela ukuhlolwa kweemviwo zesikolo kukubonisa iinkcukacha zakho. Le nqubo ibaluleke kakhulu kulabo abafunda ngokugqithiseleyo ngombono ngenxa yokucinga ngokubhaliweyo-nokuyibhalela kwifom yesalathiso-kuya kukunceda ukuba wenze umboniso obonakalayo kulula ukuba uqonde kwaye ukhumbule ngokucacileyo iimviwo.
Phawula Izinto Zakho - I-highlighters ezininzi ezinombala ungumhlobo obalaseleyo womfundi kuba uya kukhumbula oko ufunde ngokusekelwe kwimbala kwiphepha.
Nika umbala ngamnye umlinganiselo oza kuwufuna ukukhumbula uze usebenzise imibala efanelekileyo njengoko ufunda umthetho wecala lakho, izinto zeklasi kunye namanqaku. Ngokomzekelo, gxi ninisa umcimbi ophuzi; ulawulo oluhlaza, njl njl
Ukubhalwa kweeNgxelo - Okubaluleka kwakho kuqala njengomfundi ophicothiweyo kukunyamekela kwiintetho kuba ukuphulaphula indlela oza kugcina ngayo ulwazi.
Uya kuzuza kwakhona ngokurekhoda intetho kwi-smartphone yakho. Emva koko yenza ixesha lokuphulaphulwa kwiirekhodi emva kweklasi uze ubhale amanqaku ukusuka kolwazi.
Thetha Izimpendulo - Ukuba ungumfundi ophicothiweyo, mhlawumbi ufumanisa ukuthetha ngokuvakalayo nangona ungaziqondi. Kufana nawe - ngokoqobo - ukuva ucinga. Xa ufunda ngeesampulu imibuzo yeesayili, funda imibuzo kunye nezimpendulo ngokuzwakalayo. Hlalani nikhumbule ukuba kufuneka ubhale iimpendulo kwiphepha njengoko uthetha kubo ekubeni iimviwo zakho azikho ngomlomo.
Sebenzisa i-Word Association - Uhlobo lwamazwi yindlela enhle yokuba abafundi abaphicothiweyo bafunde kwaye bakhumbule amaqiniso. Izixhobo zeMnemonic, ezinjengeengoma okanye iingqungquthela, zikulungele ukudibanisa nomthetho wecala kunye neenkcazo zakho. Ingqondo yakho izakukhumbula ngokuzenzekelayo ingoma kunye nolwazi olumele.
Yenza i-Charts Flow - Njengoko abafundi be-kinesthetic bafunda ngokufanelekileyo ngokukwenza, ukwakha isakhiwo samanqaku akho kuya kunceda ingqondo yakho iqonde ulwazi kwaye ikwazi ukubona iipatheni lula. Yenza ujikelezo kunye negrafu ngendlela ebonakalayo xa ubhala kwakhona amanqaku akho kunye neenkcazo zamacala. Ngokomzekelo, sebenzisa amanqaku ahlukeneyo omyalezo wePost-it ukudala imizila emhlophe kwiibhodi ezimhlophe kunye neendonga ezingenanto.
Isenzo sokwenza umgca we-flowchart kuza kukunceda ugcine ulwazi.
Hlanganisa nomsebenzi wokuFunda - Abafundi beChinesthetic bagcina ulwazi olufanelekileyo xa benza imisebenzi. Zama ukuhamba okanye usebenzise umatshini we-elliptical ngelixa uphulaphule ukurekhodwa kwee-audio zezifundo kunye namanqaku.
Gcina iminwe yakho ihamba kakuhle Nangona ufunda - Enye indlela yokuphucula ukufunda kwakho kukubandakanya iminwe yakho ekufundeni. Umzekelo, landela amagama uze ubhale kwakhona imisho ukuze ufunde amaqhosha aphambili. Ukuthayipha amanqaku akho kunye nokusebenzisa ikhomputha yindlela enye ebalulekileyo yokuqinisa ukufunda ngokuqonda.
Ukufezekisa ezi ndlela ngoku akusayi kukukunceda kuphela ukuba uqonde izinto eziphathekayo zesikolo, kodwa ufike ufike ixesha lokuhlola. Ingaba ungumbonwa, uhlolisiso lwabafundi be-kinesthetic, zama amacebiso athile okufundwayo ukuze ubone okubaluleke kakhulu kuwe.
Indlela Yokusinda Unyaka Wakho Woku-1L
Izizathu ezi-5 zoMthetho wesikolo unzima
Yiyiphi ikliniki yomthetho?
Indlela yokubhala iNgxelo emfutshane
Imibuzo yeRudy Giuliani
Iintetho ezinikezelwa ngegrama
I-Toyota A-BAT Hybrid Truck
Indlela ye-NASCAR yokuQinisekisa imisebenzi
Iintetho zesiTaliyane zesiTyhu: IAndarsene
Imfazwe yeNtlalo 91-88 BC
Ii-Bugs ezinkulu kunazo zonke ezakhe zahlala
I-Vocal-Ups-Up to Improve Resonance for Singers
Ukubonga amagama amagama